jioi 2007: Lesona ho an'ny mpijery | Hevitra MPANOHARIANA
jioi 2007: Lesona ho an'ny mpijery
2007-08-20 @ 09:37 in Spaoro
Hitsidika kely ny amin'ny famaranana baolina fandaka indray aho. Tamin'ny ankapobeny manko dia ny mpijery matetika no mibaiko ny mpanazatra rehefa eny an-kianja. Matetika ihany koa no milefitra farany ny mpanazatra. Saingy rehefa tonga ny fotoana sahala amin'ireny dia resy ny ekipa avy eo dia ny mpanazatra na ny federasiona indray no mahazo tsiny.
Dia nitranga ihany io toe-javatra io ny sabotsy famaranana teo. NItaky ny hampidirana an'i Dola hatrany ireo mpijery maro. Nandà hatrany ny mpanazatra saingy tsy voatazony izany: nampidirina ihany ranamana io rehefa faramparan'ny lalao. Dia nandrasana ary ny zavatra tsara avy aminy sy ny antony tena nitakian'ny mpijery azy. Atao hoe mety ihany saingy mpanome baolina ny any aoriana no tena hitako taminy. Ady sahala ihany no niafaran'ny lalao nifanandrian'i Madagasikara sy La Réunion. Voatery niditra tamin'ny kitifitifitra araka ny filazako azy avy teo.
Eto moa dia tahaka ny miaraka ihany ny vintana sy ny fahaizana. Hatramin'izay nahatsiarovako tena ka nijereko ny lalaon'ny ekipam-pirenena malagasy dia tsy mbola tafavoaka tamin'io mihitsy isika ( na tamin'ny andron'i ferdinand na tamin'ny andron'ny dominique izay mpiandry tokonana avokoa no sady tsy nahatafiditra ny anjarany tamin'izany kitifitifitra izany). Tamin'ity fotoana ity dia ranamana notakian'ny mpijery maro no tsy nahatafiditra ny anjarany fa namoaka izany tamin'ny sisiny ankavanana. Efa nitsoraka tany ankavia tamin'ny ny mpiandry tokonana reinoney. Iza indray no tadiavin'ny mpijery ho olana tao? Ny mpanazatra!!! indrisy...rehefa resy dia resy e! ny mandray ny andraikiny ihany no tena afa-mivoatra fa izay manilika andraikitra kosa tsy hiova mihitsy nefa izy no tena niavian'ny lesoka.